Site na esi ya ruo na poached: ụzọ ahụike kachasị mma isi rie akwa | Nri Nutri
Akwa Ọ bụ otu n'ime nri kachasị mma yana zuru oke dị adị: otu n'ime ihe kachasị mma n'ihe gbasara uru oriri na-edozi ahụ, dị n'afọ niile, ọnụ ala na obere calorie. N'ihi nke a, ọ dị mkpa na nri ọnwụ ọnwụ ma ọ bụ, dị mfe, mgbe ị na-eme atụmatụ nri ọ bụla dị mma na nke ziri ezi maka ezinụlọ dum.
Ugbu a, dị ka ọ dị na ọtụtụ nri, ụzọ esi esi akwa akwa ha nwere ọtụtụ ihe ha ga-ekwu maka mkpokọta kalori, oriri abụba, na njigide ma ọ bụ iwepụ ihe oriri.
Ma n'agbanyeghị na ha niile mara mma, ụfọdụ dabara gị karịa ndị ọzọ. Na-agụ nke ọma, n'ihi na ị ga-enweta ụfọdụ ihe ịtụnanya.
1 Kedu ka esi esi nri akwa ahụ n'ụzọ kachasị mma?
3 Esie ya
4 anụcha ma ọ bụ kpochie
7 na tortilla
Kedu ka esi esi nri akwa ahụ n'ụzọ kachasị mma?
N'adịghị ka ihe ndị mmadụ na-eche, ụzọ kacha mma isi rie akwa abụghị rawma sie ya.
Nke a bụ n'ihi na okpomọkụ dị elu na-emepụta ihe a na-akpọ denaturation nke protein akwa, nke na-eme ka ha nwekwuo mgbaze maka ahụ. Ya mere, ndị na-eme egwuregwu na-emehie ihe doro anya site na iri nri akwa ọcha, n'ihi na ha anaghị enweta mmetụta a chọrọ.
Site na nke ahụ, ka anyị leba anya n'ụzọ dị iche iche ahụike siri esi esi akwa. Na ndepụta a, anyị atụlewo usoro ndị a na-ahụkarị; Otú ọ dị, kemgbe Ụlọ nke Vilane, ugbo Spanish kacha ochie nke nsen n'efu na-azụlite na nnwere onwe, ha na-enye gị ụfọdụ ụzọ ndị ọzọ na-atọ ụtọ na mbụ esi esi akwa akwa. Ihe karịrị afọ 25 nke ịzụ ọkụkọ n'ụzọ ochie na-aga nke ọma, yabụ anyị ga-eme nke ọma itinye ụfọdụ ndụmọdụ ya n'ọrụ.
Ọ bụrụ na ị nwere ezigbo pan na-adịghị mma, nke a bụ ya. ngwa ngwa, ụtọ na ahụ ike ụzọ eri akwa. Ị nweghị ihe ngọpụ ịghara itinye ya na nri ụtụtụ gị, n'ihi na ọ ga-ewe naanị nkeji 1 iji kwadebe ya.
Gụnyere ọdịiche ya dị iche iche: tinye ya na mmiri maka ihe karịrị nkeji ma ọ bụ obere. Ihe dị mma na ụzọ a dị mma isi esi akwa bụ nke ahụ ị nwere ike ịkwadebe ọtụtụ n'ihu ma banye n'ime ha mgbe ị na-enweghị oge buru ibu. Ghichaa akwụkwọ nri ọhụrụ, ị ga-enwekwa ọmarịcha ụzọ mbụ; akwa sie ike na-enye naanị 64 kcal.
anụcha ma ọ bụ kpochie
Usoro esi nri akwa a bụ nnọọ fashionable ekele maka akwa Benedictine na-atọ ụtọ, nri kpakpando nke nri ụtụtụ na-atọ ụtọ na brunches. Ọ bụ ezie na ihendori hollandaise nke na-esokarị ha nwere calorie ole na ole, ọ dịghị emerụ ahụ ma ọ bụrụ na i were ya site n'oge ruo n'oge na-eme ya n'ụlọ.
N'ọnọdụ ọ bụla, nsen a na-agbapụta ma ọ bụ nke a kpụchara n'onwe ya na-atọ ụtọ, ha na-eju vitamin, mineral, amino acids na protein, na ha anaghị eme abụba ma ọlị (otu ihe dị ka akwa sie, ihe dị ka 65 kcal).
Ee, ị chere na akwa e ghere eghe adịghị mma… Anyị ga-enye gị ozi ọma! Ọ bụ ezie na ụzọ isi nri a na-enye calorie ole na ole (ihe dị ka 110), ma ha adịghị ọtụtụ, ị ga-ezerekwa ụfọdụ ma ọ bụrụ na ị na-agbapụ àkwá ndị ahụ nke ọma mgbe ị na-ewepụ ha. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị na-eme ya na ezigbo mmanụ oliv na-amaghị nwoke Ọ bụghị naanị na ị ga-enye ekpomeekpo mana akụrụngwa niile nke EVOO anyị hụrụ n'anya.
Maka usoro nri a, egbula oge iji echiche gị niile. Na-emekwa ya na-enweghị akwa ụta na nri kacha mma na nke bara ọgaranya ị nwere ike iche: eke tomato chunks, galik mushrooms, ụfọdụ prawns, spinach, tuna, toki, ọka... N'ihi na ị ga-enweta a nke abụọ N'ezie, a mkpịsị aka-erichapụ nri ụtụtụ ma ọ bụ nri abalị nke dị mma dị ka ọ na-enweta. Akpụkpọ anụ abụọ na-enweghị mmanụ na-enye ihe dị ka 149 kcal.
Omelet nduku sacrosanct bụ ntakịrị caloric mana akwadoro nke ukwuu. N'ezie, ọ bụrụ na ị na-agbalị ijide onwe gị na ego ole ị nwere ike imeli ya na ụfọdụ ugboro. Dị ka Spanish Nutrition Foundation si kwuo, obere akụkụ nke omelette nduku nwere ike inwe ihe dị ka 196 kilocalories.
Banyere tortillas juru ma ọ bụ French, ọ nweghị nsogbu itinye ha na nri gị kwa ụbọchị. Otu omelet French nwere akwa abụọ nwere ike ịnwe ihe dịka 154 kcal.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, na ụzọ dị mma isi esi akwa akwa dị iche iche ma na-atọ ụtọ. N'ezie, jikọtara ya na nri ndị ọzọ akwadoro ha fọrọ nke nta ka ọ bụrụ njedebe.
Ya mere, echefula itinye akwa mgbe ị na-eme atụmatụ nri gị na nke ezinụlọ gị dum, n'ihi na ị ga-eme ahụike gị mma ... na akpa gị. Uru abụọ!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nutri Nri » Nri » Alimentos » Site na esi ya ruo na poached: ụzọ kachasị mma isi rie akwa